Hiddink: Hazard way ka jajaban tahay - BBC Somali
Hiddink: Hazard way ka jajaban tahay
Ciyaaryahanka khadka dhexe ugu dheella kooxda Chelsea, Eden Hazard, ayaa meel “mugdi” ah taagan sida uu qabo Guus Hiddink, oo ah tababaraha ku meel gaar ah.
Hazard oo 25 jir ah ayaa sanadkii hore ku guulaystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ciyaaryahanada waxaana abaalmarintaas siiyay ururka ay ku midaysanyihiin xirfadleyaasha kubadda cagta ee loo soo gaabiyo PFA, laakiin xilli ciyaareedkan wax gool ah ma uusan dhalinin.
“Sanadkii hore wax walba way qurux badnaayeen laakiin sanadkan ciyaaryahankaas wuu u madawyahay, farqiguna aad buu u wayn yahay” sidaas waxaa yiri Hiddink.
“Markii hore waxa uu ahaa ciyaaryahanka koobaad haddana waxa uu hoos kaga jiraa liis dheer oo ciyaartooy ah. arrintaasi waa mid adag. Maxaad samayn?”
Hazard oo reer Belgium ah waxaa qandaraaskiisa uga dhiman afar sano si uu u sii joogo garoonka Stamford Bridge, laakiin waxaa lala xiriiriyay in uu ka tagayo kooxda, dhaawac soo gaaray dartii ayaana sababidoona in uusan ka qaybgalin ciyaarta ay maanta oo Sabti ah la leeyihiin Manchester City taas oo garoonka Chelsea ka dhici doonta.